VPNသုံးရတာနှေးနေရင်Dataစားနေရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ? - Myanmar People Alliance
ကောက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံ၆သိန်းကျော်ကို ပိုင်ရှင်အား ပြန်လည်ပေးအပ်
ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်လိုတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ၊ ရဲတွေ ကို ကျပ်သိန်း(၁ဝဝ) လက်ငင်း ဆုချီးမြှင့်မည် ဟုဆို
ကုလညီလာခံတွင် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း စကားပြောခွင့်ရဖို့ရက်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ
VPN သုံးရတာ နှေးနရေငျ.. Dataစားနရေငျ..ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲ?
ကနျ့သတျခကျြတှေ ကြျောလှားပွီး Facebookသုံးဖို့အတှကျVPN တှအေသုံးမြားလာတာနဲ့အမြှလိုငျးကတြာတှေ၊Dataပိုစားနတောတှေ ကွုံလာရပါတယျ။ဒါကလညျး Virtual Private Network (VPN) တှရေဲ့
အလုပျလုပျပုံအရ နိုငျငံခွားက တဈဆငျ့ခံ Server တှကေိုအားလုံးဝိုငျးပွီး အသုံးပွုနရေတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ဒီလိုအခကျအခဲလေးတှကေို လြှော့ခဖြွရှေငျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှလေညျး ရှိပါတယျ။မလိုအပျတဲ့အခြိနျမှာVPNကို
ပိတျထားပါ။Facebookလိုမြိုးကနျ့သတျပိတျပငျခံထားရတဲ့ Website တှေ၊Apps တှကေိုအသုံးပွုမယျ့အခြိနျမှသာVPN ကို ဖှငျ့ပွီးသုံးသငျ့ပါတယျ။အခွား Apps တှကေိုသုံးနတေုနျးVPN ဖှငျ့ထားမယျဆိုရငျမလိုအပျဘဲ
လိုငျးပိုနှေးနမှော ဖွဈပွီး၊Data လညျးပိုကုနျနိုငျပါတယျ။အနီးစပျဆုံး VPN Serverကိုသာခြိတျဆကျပါ။နှဈသကျရာServer Locationကို ရှေးခယျြလို့ရတဲ့ တခြို့ VPN Apps တှမှော ကိုယျ့တညျနရောနဲ့ အနီးစပျဆုံး VPN Serverကိုသာခြိတျဆကျခွငျးကလိုငျးပိုမွနျစပေါတယျ။
ဥပမာ – မွနျမာနိုငျငံအတှကျဆိုရငျ United States ကိုခြိတျဆကျခွငျးထကျSingaporeကိုခြိတျဆကျခွငျးက ပိုမွနျပါတယျ။ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ VPN Apps တှကေိုသာ သုံးပါ။အခမဲ့ VPN Apps တှေ မြားစှာ ရှိပမေယျ့Rating
ကောငျးပွီးယုံကွညျရတဲ့Apps တှကေိုသာအသုံးပွုခွငျးကSecurity နဲ့Performance အပွညျ့အဝ ရရှိစမှောပါ။Freeထဲကဆိုရငျတော့ 1.1.1.1ဆိုတဲ့ App လေးကို Recommend ပေးပွီး၊Paidဆိုရငျတော့NordVPNကိုRecommend လုပျခငျြပါတယျ။
ဒီနညျးလမျးလေးတှကေိုသုံးပွီးVPNကို ပေါ့ပါးမွနျဆနျစှာအသုံးပွုနိုငျကွမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျနေ
VPN သုံးရတာ နှေးနေရင်.. Dataစားနေရင်..ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
ကန့်သတ်ချက်တွေ ကျော်လွှားပြီး Facebookသုံးဖို့အတွက်VPN တွေအသုံးများလာတာနဲ့အမျှလိုင်းကျတာတွေ၊Dataပိုစားနေတာတွေ ကြုံလာရပါတယ်။ဒါကလည်း Virtual Private Network (VPN) တွေရဲ့
အလုပ်လုပ်ပုံအရ နိုင်ငံခြားက တစ်ဆင့်ခံ Server တွေကိုအားလုံးဝိုင်းပြီး အသုံးပြုနေရတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခက်အခဲလေးတွေကို လျှော့ချဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ VPN ကို
ပိတ်ထားပါ။Facebookလိုမျိုးကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ Website တွေ၊Apps တွေကိုအသုံးပြုမယ့်အချိန်မှသာVPN ကို ဖွင့်ပြီးသုံးသင့်ပါတယ်။အခြား Apps တွေကိုသုံးနေတုန်းVPN ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်မလိုအပ်ဘဲ
လိုင်းပိုနှေးနေမှာ ဖြစ်ပြီး၊Data လည်းပိုကုန်နိုင်ပါတယ်။အနီးစပ်ဆုံး VPN Serverကိုသာချိတ်ဆက်ပါ။နှစ်သက်ရာServer Locationကို ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ တချို့ VPN Apps တွေမှာ ကိုယ့်တည်နေရာနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး VPN Serverကိုသာချိတ်ဆက်ခြင်းကလိုင်းပိုမြန်စေပါတယ်။
ဥပမာ – မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင် United States ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းထက်Singaporeကိုချိတ်ဆက်ခြင်းကပိုမြန်ပါတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ VPN Apps တွေကိုသာသုံးပါ။အခမဲ့ VPN Apps တွေ များစွာ ရှိပေမယ့်Rating
ကောင်းပြီးယုံကြည်ရတဲ့Apps တွေကိုသာအသုံးပြုခြင်းကSecurity နဲ့Performanceအပြည့်အဝရရှိစေမှာပါ။Freeထဲကဆိုရင်တော့ 1.1.1.1ဆိုတဲ့ App လေးကို Recommend ပေးပြီး၊Paidဆိုရင်တော့NordVPNကိုRecommendလုပ်ချင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကိုသုံးပြီးVPNကို ပေါ့ပါးမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နေ
← တောင်ပေါ် ဒေသရဲ့မီးအိမ်ရှင်မလေးဆိုတဲ့နမည် နဲ့တစ်ကယ်ပဲလိုက်ဖက်ပါတယ်အငြိမ်း
တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း(၁၅.၈.၂၀၂၁) မှ(၂၁.၈.၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ →